Momba anay - Filtration Precision
Precision Filtration, natsangana tamin'ny taona 2010, misy injeniera matihanina zokiolona, ​​mpiasa mitantana sy mpiasa mahay ary manana traikefa mihoatra ny 18 taona amin'ny famokarana, torohevitra ary fivarotana vokatra fanivanana ranon-javatra indostrialy sy ireo fampiharana mifandraika amin'izany.
Manoro hevitra izahay, mamokatra ary mamatsy sambo kitapo ranoka indostrialy, sambo fantsom-pandrefesana, saringan, rafitra sivana fanadiovan-tena, kitapo sivana, cartridge sivana, sns., Ho an'ny fanivanana ny rano an-tany, ny rano fanodinana, ny rano ambonin'ny rano, ny rano maloto, ny rano DI amin'ny semikonduktor & indostrian'ny elektronika, ranon-javatra simika sy ara-pitsaboana, solika sy gazy, sakafo sy zava-pisotro, fanafody, fametahana, loko, ranomainty ary fampiharana indostrialy hafa.
Ny filtration Precision dia mamokatra sy manome sivana kitapo avo lenta ho an'ny indostria. Nahazo toeram-pamokarana manokana izahay ary noho izany haingana amin'ny fandefasana, tsara indrindra amin'ny vidiny ary avo lenta.
Manana safidy midadasika amin'ny sivana mpanelanelana amin'ny 0,2 micron ka hatramin'ny 1,200 micron izahay, famoronana fitaovana samihafa mba hiantohana ny fifandanjan'ny simika. Ireo sivana kitapo ireo dia misy amin'ny fitaovana: Polypropylene (Needle Felt), Polyester, Nylon (NMO), Nomex, PTFE, PP nandevona ny haino aman-jery sivana microfiber nohamafisiny ho an'ny fahaizan'ny filtration avo lenta na fanesorana solika.
Precision Filtration dia orinasa mpamokatra, consultancy ary varotra matihanina amin'ny sehatry ny fanivanana ranoka ary manolotra vahaolana fanivanana mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa.
Manome vokatra sivana avo lenta izahay ary nanangana tobin'ny mpanjifa lehibe tato ho ato miaraka amin'ny fifandraisana izay manome lanja ny fahamendrehantsika, ny serivisy tsara ary ny vidin'ny fifaninanana.
Ny vokatray dia aondrana any Kanada, Brezila, Alemana, Italia, Afrika atsimo, Aostralia, Korea atsimo, Indonezia, Filipina ary firenena hafa any amin'ny faritr'i Azia Pasifika. Manana ekipa olona mahazatra ny fampiharana indostrialy izahay ary mahatakatra ny fototra ao ambadiky ny fanaovana filtration tsara. Manohy manatsara ny vokatrao amin'ny alàlan'ny fizotran'ny R&D izahay.
Precision Filtration, ny mpiara-miasa amin'ny fanivanana ranoka. Ny ekipanay dia misy 24/7.